DAAWO: Wiil Afrikaan ah oo amaan badan ka mutaystay bulshada Faransiiska min shacab ilaa madaxwayne!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Wiil Afrikaan ah oo amaan badan ka mutaystay bulshada Faransiiska min...
DAAWO: Wiil Afrikaan ah oo amaan badan ka mutaystay bulshada Faransiiska min shacab ilaa madaxwayne!!
(Paris) 28 Maajo 2018 – Wiil dhallinyaro oo qaxooti ah oo kasoo jeeda dalka Mali ayaa maalmahan ka shidan baraha bulshda kaddib markii uu badbaadiyay wiil yar oo muluq ah.
Wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabo Mamadou Gusama kuna nool magaalada Paris ayaa fuulay dabaqa 4-aad ayaa muuqaalkiisu xulayay baraha bulshada, waxaana markii dambe qaabiley madaxwaynaha Faransiiska ee Emmanuel Macaron oo uga mahad celiyay naf-hurnimadiisa iyo dadnimadiisa.
Wiilkan Malian-ka ah oo loo bixayay Spiderman-ka runta ah, ayaa la siiyay dhalashada rasmiga ah ee dalka Faransiiska iyo shaqo rasmi ah, badbaadada wiilka yar darteed.
Previous articleCristiano Ronaldo oo la sheegayo inuu wada hadal la bilaabay kooxda PSG! (Kulan durba dhacay)
Next articleDAAWO: Wiil yar oo 2-jir ah oo qasaalad dhex galay & dhibka laga maray!